Iibhokisi zePikniki eziPhambili ezi-10 zayo nayiphi na imisebenzi yangaphandle ye-2021- iPureWow - Ekhaya
Umindiya Izilwanyana Zasekhaya Kwenziwa Kanjani Impilo Yengqondo Ulwazi Kunye Nemfundo Kwiindaba Uxinzelelo Imisebenzi Kunye Nemali Iindaba Zefashoni Uphononongo Lweemovie
Iingubo ezili-10 eziPhambili zePikniki kuyo nayiphi na iAustralia yangaphandle
Njengoko ihlobo lisondela, baya besanda abantu abaya kubamba ngaphandle. Kwaye yeyiphi indlela ebhetele yokufumana umoya omtsha kunokuchopha ngengubo yepikniki ngejogcuterie enkulu kwaye ibhotile isiselo somdiliya ? Hayi kakhulu. Wena unakho ukubaleka netawuli yaselunxwemeni okanye iphepha elidala, kodwa emva kweenyanga sichithe ngaphakathi, sikulungele ukwenza ukutya kwe-fresco isiganeko. Kwaye ngokwendalo, oko kufuna ukuba umva ubambe ngasemva. Funda ezi ngubo zilishumi zepikniki.
ZIQHELEKILEYO: Izitya zePikniki ezingama-29 ezilula neziphathekayo
1. Isibonelelo Ingubo yaseMexico
Le ngubo yaseMexico ilungiswe kakuhle eyenziwe ngesandla Ububele LA ilungele nabani na ofuna ingubo yepikniki engazukuphula ibhanki. Ayisiyiyo le ifunyanwa ingaphantsi nje kweedola ezingama-20, ineengxelo ezingaphezu kwe-8 500 zeenkwenkwezi ezintlanu kwiAmazon kwaye inokusetyenziselwa iipiknikhi, iyoga, iintsuku zaselwandle okanye njengokuphoswa kwe-chic. Ngaphezu koko, ibuye ibuyisele umva, kuba isahlulo sentengo nganye yokuthenga izibonelelo zokunceda amaqabane esisa, azinikeleyo ekupheliseni ubuhlwempu kwihlabathi liphela.
$ 20 KWI-AMAZON
Kufuneka ubukele imovie yabantwana
2. Ingubo Yeti Lowlands
Uninzi lweSplurge lufanelwe
Inkqubo ye- Ingubo yase-Yeti Lowlands inokuba ibiza kakhulu kunokuba ubucinga ukuba ingubo yakho yepikniki elandelayo iya kuba, kodwa ingaphezulu kakhulu kunendawo yokuhla usitya isidlo sakho sasemini. Ithambile, i-padded, igqunyiwe kwaye ayinamanzi, isenza yonke le ngubo yomelele ihlale ixesha elide kwaye ilungele nawuphi na umsitho-ukusuka kwizitiyela kunye neekonsathi ukuya ekampini nasekuhambeni intaba.
Yithenge ($ 200)
3. UMark & ​​Graham Ingubo yePikniki engenaManzi
Ingubo yePikniki engenaManzi
Ukuba uyakwazi ukulinyusa uluhlu lwamaxabiso ngengubo engangeni manzi engenzi mfutshane ngobuhle, ingubo entle yePikniki engangenwa ngamanzi evela UMark noGraham ubiza igama lakho. Uluhlu oluphezulu ngumxube othambileyo woboya oza kwimibala emibini eyahlukeneyo ye-gingham, kunye nepatheni ye-herringbone ye-navy edging edging. Ngaphantsi ngumaleko ongenawo amanzi ukuze ungakhathazeki ngokuwonakalisa ngokuwubeka engceni enombethe.
Owu, kwaye ukuba oko akonelanga, unganako kwakhona ukuba kwenziwe imogogramu.
YITHENGA ($ 129)
4. Ingubo yePicniKing yePikniki
Eyona ngubo ingangenwa ngamanzi iphantsi kwe- $ 35
Kuyafana nokujonga ingubo ye-gingham engenamanzi apha ngasentla, PicniKing Ipikniki ingubo ikunika inqanaba elifanayo lokukhusela amanzi malunga ne- $ 30. Eyilwe ngamanqanaba amathathu (kubandakanya umaleko wegwebu wesiponji kunye noboya bangaphandle beplar), indawo engezantsi engenamanzi ayithethi ukuba kufuneka uncame intuthuzelo. Olu luyilo loyilo lukwenza ukucoca ngokulula nakuphi na ukuchitheka-unokuyiphosa kumatshini wokuhlamba.
$ 30 KWI-AMAZON
5. CGear Sandlite Ulwandle Mat
Eyona ndawo ilungele uLwandle
Ngokuqinisekileyo, nayiphi na ingubo ingaba yingubo yolwandle ukuba ufuna ukuba yiyo, kodwa CGear Sandlite Ulwandle Mat ngumdlalo otshintsha. Uyilo lobukrelekrele (kunye nelungelo elilodwa lomenzi) loyilo olwenziweyo lwenzelwe ukuvumela isanti ukuba ihambe ngendlela enye ngelaphu: ezantsi, ikunika amava angenasanti. Ukuba isanti isebenza ngendlela yayo emethini isuka emacaleni (hayi ngelaphu), iswayipha elula yesandla sakho iya kuyithumela ibuyele kanye apho ufuna khona, kuba ingubo yenzelwe ukuwisa ubumdaka okanye isanti enokuchwechwela umphezulu.
$ 44 KWI-AMAZON
Imiboniso bhanyabhanya eyimfihlakalo ephezulu
6. Ingubo esebenzayo ye-All-Purpose Blanket
Eyona ilungele uMdlalo woSuku / eyona nto ibalulekileyo yePikniki yePikniki
Abathandi bezemidlalo okanye abazali, ukupopola ngaphandle kwemidlalo yebhola kuhlala kumnandi, kodwa nge Iyasebenza Ingubo Yonke-Injongo , luphumelele ngokupheleleyo (nokuba injani na imozulu). I-polyester eqinisiweyo kunye noyilo lwenylon kwelinye icala lwenza ukuba kuthintelwe imozulu ukumelana nezinto, ngelixa uboya begusha obugqwesileyo bugcina ubushushu ukuze uhlale ushushu. Kukulungele ukusetyenziswa njengengubo yepikniki, ukugoqa okanye ukwenza i-poncho yokwenza izinto, okwenza ukuba kube yinto ekhethiweyo yokwenza nantoni na eziswa ngumhla.
$ 27 KWI-AMAZON
7. Matador Pocket Ingubo
Uninzi lwePikniki yePhepha lokuNgubo
Ukutsala yonke into oyifunayo kwipikniki kunokuba nzima, yiyo loo nto siyithanda Matador Pocket Ingubo . Isonga isincinci ngokwaneleyo ukuba ilingane epokothweni yakho xa igxunyekwe engxoweni yayo. Isenokungabi nayo eyona padding intle, inikwe ubume bayo obusongekayo, kodwa iyahlekisa ngokuphathekayo. Kukurhweba, kodwa ukuba uhlala usendleleni-kwaye uthanda ukuzilungiselela nantoni na-kunokuba kufanelekile.
YITHENGA ($ 30)
8. VonShef Ipikniki ingubo
Kanye xa ucinga ukufumana ingubo emnandi, e-chic kunye neyomeleleyo engaphantsi kwe- $ 25 ayinathemba, i VonShef Ipikniki ingubo ungqina ukuba uyaphosisa-kwaye asiphambani ngayo. Ayisiyiyo kuphela i-rustic herringbone pattern kunye ne-faux carrier carrier ethandekayo, kodwa ixabiso eliphantsi lide lifumane ulwelo olungena manzi lwe-PEVA, ke ukuhlala kumhlaba ofumileyo akuyi kukuphazamisa ukutya kwakho kwe-fresco.
$ 25 KWI-AMAZON
9. Ingubo yeLL yeBhontshisi engaphandle yaManzi
Eyona pikniki yengubo ekhululekile
Ayothusi loo nto Ingubo yangaphandle yeLL Bean engenaManzi ithatha ikeyiki yokuthuthuzela. Emveni kwakho konke, kunjalo uphawu olwaziwa ngoboya balo kunye nesherpas luya kwenza ingubo yokubaleka yeepiknizi. Yenziwe nge-100 yeepesenti (i-plaid) yoboya be-polyester ngaphezulu kunye ne-100 yeepesenti yenylon emazantsi, kukhuselekile ukuthi i-LL ibophelele ipesenti ye-100 ekwenzeni oku kuphosa ngaphandle iindawo ezilinganayo zihlale zizolile kwaye zonwabile.
YITHENGA ($ 59)
Ukunciphisa olu luhlu lweengubo zepikniki ezintle kunokuba nzima, kodwa ukuba ufuna elona xabiso libalaseleyo, uya kufuna ukuqaphela i-PortableAnd Blanket. Inamaqweqwe amathathu okubamba — ukuxhaswa kwe-PEVA engenamanzi, isiponji esithambileyo kunye noboya ngaphezulu — le ngubo yepikniki ikunika okona kulungileyo kuwo onke amazwe: uhlahlo-lwabiwo mali, intuthuzelo, ukuthintela amanzi kunye nesimbo.
$ 28 KWI-AMAZON
inkwethu ebusika kunyango lwasekhaya
ZIQHELEKILEYO: I-52 yezibheno zasehlotyeni zokuBethwa ngumoya kuwo onke amaCookout ngeli xesha lonyaka
Izigaba Izilwanyana Zasekhaya Abahlobo Nosapho Abaphumeleleyo
Ioyile yealmondi yokukhula kweenwele ukuba isetyenziswa njani
unyango lwendalo lokuvela kwakhona kweenwele
Uhlobo lokusika iinwele lomntu obhinqileyo onegama
iingoma kulula ukuzicula
iingoma ezilungileyo zekaraoke